Guddiga Fulinta Jaaliyada DDSI Ee Nonrth America Oo Maanta Shiray Iyo Go'aamadii Kasoo Baxay. - Cakaara News
Guddiga Fulinta Jaaliyada DDSI Ee Nonrth America Oo Maanta Shiray Iyo Go'aamadii Kasoo Baxay.
Minneapolis(CN) Sabti.April.04.2015, waxaa maanta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota shir kuyeeshay guddiga sare ee jaaliyada DDSI Waqooyi Ameerika kaasoo lagaga hadlayay qaabka ay jaaliyadu uga hawlgali lahayd qorshayaasha horyaala.
Shirkaas ayaa wuxuu kubilowday jawi wanaagsan oo ahaa in aayado quraan ah lagu furay oo uu kufuray mudane Ibraahim Khaliil. Kadibna waxaa laguda galay qodobadii shirka oo ahaa kawada hadalka hawlaha iyo qorshayaasha dhaadheer horyaala Jaaliyada kuna hawlgali doonto.
Xubnihii guddiga ayaa si balaadhan uga dooday qaabka ugu haboon ee jaaliyadu ugu adeegi karto bulshawaynta DDSI ee kunool North America iyo sidii xidhiidh wanaagsan iyo wada shaqayn dhan walba ah jaaliyadu ula yeelan lahayd DDSI.
Hadaba sida uu noogu soo waramayo wariyahayaga North America ee shabakada CakaaraNews, wada hadal iyo dood dheer kadib, go'aamada kasoo baxay shirkaasi guddiga sare ee Jaaliyada DDSI Waqooyi Ameerika ayaa waxaa kamid ahaa qodobadan hoos kuxusan.
1)-Guddiga fulinta ee jaaliyada ayaa hoosta kaxariiqay in ay sida oogu dhakhsaha badan jaaliyadu u bilawdo hawlaheeda shaqo ee u qorshaysan.
2)-Waxay guddigu waxay isku raaceen in ay dar dar galiyaan wada shaqaynta jaaliyada iyo maamulka DDSI ee dhanka horumarka, nabadgaliyada iyo maamulka suuban.
3)-Waxay ansixiyeen in lafuro xafiiskii ay jaaliyadu kushaqayn lahayd, sidoo kale ay ansixiyeen miisaniyadii kubixi lahayd guud ahaan sanadkan.
4)-Guddigu wuxuu buuxiyay cod buuxana ku ansiyeen labadii xubnood ee kadhinaa.
Shirkan ay hogaaminayeen gudiga fulinta oo ay kasoo baxeen goa'aamadaas ayaa waxaa khadka taleefonka kala qayb galay qunsulka dawlada dhexe Itoobiya u jooga wadanka maraykanka mudane Xabiib Yuusuf oo dhankiisa cadeeyay in ay dawlada dhexe garab taagan tahay jaaliyada DDSI ee North America islamarkaana ay wada shaqayn wanaagsan lasamayn doonto.
Ugu danbayn gudiga ayaa go'aamiyay in laqabto shirkii golaha dhexe ee jaaliyada oo ay kasoo qayb gali doonaan golaha dhexe oo kakooban 51 xunood kaasoo dhici doona maalinta Sabtida soo socota.